I-ModernDeck, umxhasi we-Twitter wedesktop okanye izikhangeli zewebhu | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iModernDeck. Yi le Umxhasi weTwitter wasimahla novulelekileyo onokufumaneka kwiGnu / Linux, Windows kunye neMacOS. Esi sicelo sisebenza kwi-TweetDeck, kodwa sibonisa ujongano lomsebenzisi oluphefumlelweyo loyilo lweMathiriyeli, kwaye songeza izinto ezintsha zokwenza ngokwezifiso.
Lo mqulu weTweetDeck yenziwe nge-Electron kwaye ikhutshwe phantsi kwelayisenisi ye-MIT. Isicelo sidibanisa amandla e-TweetDeck kunye nokulula kokusetyenziswa okulindelekileyo kumthengi we-Twitter.
1 Iimpawu eziqhelekileyo zeModernDeck
2 Faka iModernDeck kwi-Ubuntu
2.1 Ukuhamba ngeFlatpak
2.2 Njenge AppImage
2.3 Izandiso kwizikhangeli zewebhu
Iimpawu eziqhelekileyo zeModernDeck
I-ModernDeck yiyo ifumaneka ngeelwimi ezininzi kunye namaqonga ahlukeneyo.
Xa inkqubo iqala, i-interface yayo ibonakala ingcono kakhulu xa ithelekiswa nesicelo esisemthethweni se-Twitter. I-GUI yenzelwe ukuboniswa kwiithebhu, ivumela abasebenzisi ukuba bazilungise kwaye bazihambise ngendlela ezisifanele ngayo.
Ujongano yibhodi enawo onke amakhonkco esifuna ukuwongeza, eya kuboniswa kwicandelo lasekhohlo, ukubonelela ngokukhawuleza nangokulula ukufikelela.
Eyona nto iphambili yalo mxhasi ivela kwi iindlela ezininzi zokwenziwa ngokwezifiso ezikhoyo. Kuya kusivumela ukuba senze ngokwezifiso ubungakanani bekholamu kunye nombhalo, iifonti, ubungakanani kunye nemilo yemifanekiso yeprofayili kunye nomxholo jikelele, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Kwakhona kuya kusivumelar lungisa ukuziphatha kweeTweets, okuthetha ukuba ivumela usetyenziso ukuba luhambe ngexesha lokwenyani, ludlale ngokuzenzekelayo ii-GIFs okanye sivumele ukuba siqwalasele izandi zokulumkisa.
Inkqubo iya kusinika ithuba lokusebenzisa iindlela ezimfutshane zokucofa, apho ungasebenzisa le nkqubo ngendlela elula.
Enye into eya kusivumela inkqubo ukuba siyenze rhweba ngaphandle izicwangciso ngokuthe ngqo, kwaye ngoko gcina ixesha elithile uqwalasela inkangeleko yenkqubo.
Kwimeko apho ufuna susa amagama namabinzana ekuveleni kwifidiKuya kufuneka sibafake kuphela kwicandelo elizinikeleyo, kwiiSetingi zeNkqubo.
Faka iModernDeck kwi-Ubuntu
Esi sicelo Singayifumana ifumaneka njenge-AppImage kunye nephakheji yeFlatpak. Ukongeza siya kuba nokukhetha sebenzisa lo mxhasi we-Twitter ukusuka kwisikhangeli sewebhu, usebenzisa izandiso ezifumanekayo kwezona bhrawuza zidumileyo.
Ukuba ufuna ukufaka le nkqubo njengephakheji yeFlatpak leyo ingafumaneka kwi Flathub, kuyafuneka ukuba obu buchwephesha buvulwe kwinkqubo yakho. Ukuba usebenzisa Ubuntu 20.04 kwaye awukabinayo, ungaqhubeka Isikhokelo ukuba ugxa wakhe ubhale kule bhlogi kwithuba elidlulileyo
Xa ungasebenzisa olu hlobo lomthwalo kwindlela yakho, kuyakuba yimfuneko kuphela ukwenza lo myalelo ulandelayo kwi-terminal (Ctrl + Alt + T) faka inkqubo:
Emva kofakelo, unako qala inkqubo ujonge umqalisi wayo kwikhompyuter yethu okanye uphumeza lo myalelo:
Ukuba ufuna susa le nkqubo efakwe njengephakheji yeFlatpak, konke okufuneka ukwenze kukuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye usebenze kuyo:
Ukuba unomdla wokuzama le app njenge-AppImage, unako khuphela le fayile kwi iphepha lokukhupha iprojekthi. Ukongeza, unokukhuphela inguqulelo yamva nje epapashwe namhlanje, uvule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye wenze kuyo. wget ngoku Landelayo:
Emva kokugqiba ukukhuphela ifayile, konke okuseleyo kukuya kwifolda esigcine kuyo. Xa silapho, siyakwenza oko tshintsha iimvume zefayile ngalo myalelo ulandelayo:
Emva komyalelo wangaphambili, singakwazi qala inkqubo ngokucofa kabini kwifayile okanye ngokuchwetheza kwi-terminal:
Izandiso kwizikhangeli zewebhu
Enye into enokwenzeka ukuba kuya kufuneka sikwazi ukusebenzisa le nkqubo, iya kusebenzisa i izongezo zebhrawuza zewebhu ezinikezelweyo kwi iwebhusayithi yeprojekthi. Apho ungafumana izongezo zebhrawuza chrome, Firefox y Umda.
Kwimeko apho usebenzisa i-Twitter rhoqo kwaye ungathanda ukwenza ngokwezifiso kunye nokhetho ukhetho olukhoyo kumxhasi wakho, mhlawumbi ukuzama iModernDec kunokuba nomdla kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-ModernDeck, umxhasi we-Twitter wedesktop okanye izikhangeli zewebhu
IFirefox 96 ifika nokuphuculwa kweevidiyo, izilungiso kwiSSRC, WebRTC kunye nengxolo encinci.